CAT S41, nke a bụ ekwentị ọhụrụ anaghị emebi emebi site na CAT | Gam akporosis
Niile unu na-ata ahụhụ a ekwentị okuku na-arụ nke a gbawara n'etiti ihuenyo. Ma oburu na odighi n’ebe gi no, n’ezie onye ezinaulo gi ma obu enyi gi enweela nsogbu di otua. Ọ bụkwa n'ihi na ha ejighi ekwentị CAT.
Onye nrụpụta ahụ bụ ọkachamara na nrụpụta ngwaọrụ na-eguzogide ọgwụ na asambodo ndị agha. Ihe atụ ikpeazụ? Na Nwamba S41, bụ ezigbo nkume nke anyị nwere ike ịnwale na nkwụpụta ndị nrụpụta n'oge IFA na Berlin.
2 CAT S41 ọrụaka e ji mara
Ezubere ekwentị CAT ka ọ mara mma, mana ka ọ rụọ ọrụ. Emeputa na-enye njedebe ya nnukwu iguzogide ụjọ na ọdịda na ọnụahịa nke enweghị ike ịnye atụmatụ ejidere, yana oke mkpa ma ọ bụ eriri mara mma. Ọ dịghị ihe nwere ike ịbụ na eziokwu, na CAT S41, dị ka dum akara nke emeputa ọnụ, bụ bụghị anya mara mma, ma ọ bụ nnọọ eguzogide ọgwụ.
Ma ọ bụ na ngwọta ọhụrụ nke onye nrụpụta nwere, n'otu aka, a Asambodo IP68 nke kwere nkwa na ekwentị nwere ike mikpuo onwe ya nsogbu n’enweghị nsogbu ruo nkeji iri atọ, na mgbakwunye inwe 810G asambodo ndị agha nke na-eme ka CAT S41 bụrụ ezigbo ujo ma dobe ekwentị na-eguzogide ọgwụ.
Ngwọta ọhụrụ ahụ CAT Ọ nwere atụmatụ siri ike, nke akwadoro iji guzogide mmekpa ahụ ọ bụla, yana nnukwu bọtịnụ nwere mmetụ rubbery nke na-enye ohere ka ejiri ngwaọrụ ahụ na gburugburu ebe ọ bụla, n'agbanyeghị ma aka gị jupụtara na apịtị, mmiri ...
Na nkenke, okwute nke na-akwado ihe niile. Ọ bụrụ na ihe CAT ọnụ na-ji ihe, ọ bụ site na nnukwu iguzogide nke ha ngwọta na Nwamba S41 bụ ihe nlele ọhụrụ nke ya.
CAT S41 ọrụaka e ji mara
Ihuenyo 5.0 sentimita asatọ na mkpebi HD zuru oke na Gorilla Glass 4 nchebe
Nhazi Mediatek Helio P20 4 × 2.4 GHz. C-A53 + 4 × 1.7 GHz. C-A53
Nchekwa n'ime Micro GB gbasaa 32 GB
Igwefoto azụ 13 MPx - PDAF
Igwefoto ihu 8 MP - f / 2.0
Atụmatụ ndị ọzọ IP68 Certified / 810G Military Certified / Accelerometer / Gyroscope / Dual Ọkà Okwu
N'ihe gbasara njirimara teknụzụ, CAT S41 bụ ekwentị nke ga-ezute karịa mkpa onye ọrụ ọ bụla. Special mesiri ike na gị 5-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi àjà crisp na vivid agba. Mana dịka m kwuru na mbido vidiyo mbụ, ekwentị a adịghị njikere ịkwaga egwuregwu kachasị mma n'ahịa mana iguzogide ihe ọghọm ọ bụla ị nwere, ịnwe ike iburu ekwentị a ebe ọ bụla na-enweghị nsogbu gbasara ihe ọ bụla.
More ma ọ bụrụ na anyị na-elebara ya nnukwu Cat S41 na-ekwe nkwa nnwere onwe nke n'etiti 3 na 4 ụbọchị. Izu ụka n'ugwu? echegbula, CAT S41 agaghị ahapụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA » CAT S41, nke a bụ ekwentị ọhụrụ anaghị emebi emebi site na CAT
Daalụ maka ozi
Terns ga-ada ... n'oge na-adịghị anya ...